“सर्वोच्च अदालत,को फैसला, पछि राष्ट्रपति पनि अप्ठेरोमा ! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
“सर्वोच्च अदालत,को फैसला, पछि राष्ट्रपति पनि अप्ठेरोमा !
“काठमाडौ । सर्वोच्च ,अदालतको फैसलासंगै अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध पनि खतराको घण्टी वजेको छ । सोमवार सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारीसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको संसद विघटनको निर्णय बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक संसद पुनस्थापना, गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालत,ले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुनस्थापना गरेको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए।
“प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको हो।”
“सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासंगै राष्ट्रपति भण्डारी पनि अब अप्ठेरोमा पर्ने संकेत देखिएको छ । यस अघि नै नेपाली कांग्रेसका केही नेता र विवेकशिल पार्टीले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने माग उठाउँदै आएका छन् ।”
“प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपतिले साथ दिदै आएको भन्दै विवेकशिलले संसद पुनस्थापना पछि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग सार्वजनिक रुपमा राखेको छ । नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुले पनि यो कुरा सार्वजनिक रुपमा अभिब्यक्त गरेका छन् ।”
Previous “ओलीलाई सबैभन्दा, ठूलो झट्का, सर्वोच्चले उल्ट्याइदियो निर्णय”
Next “सर्वोच्च अदालतले,संसद पुनस्स्थापना,को फैसला सुनाएपछि, महेश बस्नेतले,गरे यस्तो आवहान”